तपाइँ पिसाव पोल्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? बच्नका लागि यस्ता छन् उपायहरू | NepalDut
तपाइँ पिसाव पोल्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? बच्नका लागि यस्ता छन् उपायहरू
डा. दीपक रौनियार, काठमाडौं
पिसाव पोल्ने धेरै कारणहरु छन् । त्यसैले पिसाव पोल्ने समस्या लिएर अस्पताल धाउनेको संख्या दिनानुदिन बढदै गएको छ । सामान्य सावधानी अपनाउदा समाधान हुने कतिपय समस्याहरु जानकारीको अभावमा विकराल भएको पनि पाइएको छ । तसर्थ पिसावका बारेमा समान्य जानकारी हुन आवश्यक छ ।
खासगरि शरीरमा रहेको अनावश्यक तत्व पिसाव र पसिनाका माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । साधारण अर्थमा मिर्गौलाको माध्यमद्धारा शरीरमा रहेका विकार पदार्थ बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया पिसाब हो ।
पिसाब थैलीमा पिसाब भरिने बित्तिकै स्नायु प्रणालीको संकेतमार्फत मस्तिष्कमा जानकारी पुग्छ र पिसाब फेर्न मन लाग्छ । सकेसम्म पिसाब लागेको महसुस भएको एक दुई मिनेट भित्रै फ्याँक्नु पर्छ ।
पिसाबको संक्रमण पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै हुने गर्छ महिलाको पाठेघर र पिसाब थैली एकदमै नजिक रहेको तथा पुरुषको तुलनामा महिलाको पिसाब नली निकै छोटो भएको कारण महिलालाई धेरै सताउँछ । संक्रमणका कारण पिसाब थैलीको भित्रको म्युकोज (थैलीको भित्रपट्टी रहेको छालाजस्तो भाग)मा घाउ बनेको हुन्छ ।
पिसावमा रगत किन देखिन्छ ?
पिसाब रगत आउनुको काारण भनेको संक्रमणले बनाएको घाउमा रहेका नसा च्यातिएर वा फुटेर नै हो रगत नै आउने अवस्थामा आएका बिरामीले चिकित्सककहाँ पुगेर उपचार थालिहाल्नु पर्छ । पिसाबमा रगत आएको छ तर दुख्दैन भने अनावश्यक मासु पलाएको कारणले हुने गर्छ ।
पिसाब नली तथा थैलीमा संक्रमण हुनुको कारणमा ब्यक्तिगत सरसफाइको कमी, यौनांगको सरसफाइमा ध्यान नदिनु, यौन सम्पर्क, अन्य संक्रमण, पानीको कम सेवन, अशुद्ध पानीको सेवन पिसाब फेरीसकेपछि पूरै ननिस्कनु नै हो ।
संक्रमण गराउने ब्याक्टेरिया आकाश तथा पातालबाट आउने नभई पिसाब तथा थैलीबाट नै आउने हो । सामान्यतया एक मिलिलिटर पिसाबमा एक सयदेखि एक हजार ब्याक्टेरिया छ भने त्यसले कुनै असर गर्दैन तर त्यो संख्या बढेर पाँच गुणा बढी भयो भने समस्या निम्तने गर्छ ।
पानीको सेवन कम गर्दा पनि ब्याक्टेरियाको संख्या बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यस कारण गर्मी क्षेत्रमा डिहाइड्रेसनको समस्या भयो भने पनि पिसाबको संक्रमण हुन्छ । मानिसहरुमा विभिन्न समस्याका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको समयमा पिसाबको संक्रमण बढी हुन सक्छ ।
यसका साथै मिर्गौला तथा पिसाब थैलीमा हुने पत्थरी, गर्भवती, मेनोपेज भएका महिला, मधुमेह, क्याथेटर राखिएको मानिस, जन्मजात समस्या तथा बिभिन्न केमिकलको प्रयोगका कारणले पनि पिसाबमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।